OPPO X2 Series Event : 120Hz Screen And 5G, X2 Pro Adds A Periscope Camera | Net Guide
Home Article OPPO X2 Series Event : 120Hz Screen And 5G, X2 Pro Adds...
ယခုနှဈကငျြးပမယျ့ MWC ကို ဖွတျသိမျးလိုကျပွီးနောကျ စမတျဖုနျးကုမ်ပဏီအမြားစုဟာ ကုမ်ပဏီထုတျဖုနျးတှကေို ကိုယျပိုငျပှဲလုပျပွီး မိတျဆကျလာကွပါတယျ။ အခု ဒီလိုမိတျဆကျသူတှထေဲမှာ OPPO လညျး ပါဝငျလာပါပွီ။ တရုတျစမတျဖုနျးထုတျလုပျသူ OPPO အနနေဲ့ OPPO Find X2 ၊ OPPO Find X2 Pro နဲ့ OPPO Watch တို့ကို မိတျဆကျပေးလိုကျပွီ ဖွဈပါတယျ။ မိတျဆကျလိုကျတဲ့ စမတျဖုနျးသဈ2မြိုးမှာ120Hz screens, 5G modems ပါတဲ့ Snapdragon 865 chipsets နဲ့အတူ အားသှငျးမွနျဆနျမှုတို့လို စိတျဝငျစားစရာကောငျးလှတဲ့ အပွငျအဆငျတှေ ထညျ့သှငျးပေးလာပါတယျ။ Find X2 Pro မှာတော့ အထငျကွီးလောကျစရာ ကငျမရာတပျဆငျမှုနဲ့ပါ။ ဖုနျး2မြိုးမှာ တူညီတဲ့ 10bit 6.7” AMOLED panel ၊ QHD+ resolution နဲ့အတူ 120Hz refresh rate ကို သုံးထားပါတယျ။ input lag နဲ့ DCI-P3 အရောငျကို 100% လှမျးခွုံမှုရစဖေို့အတှကျ 240Hz touch sampling ကိုလညျး ထညျ့ပေးထားပါတယျ။ နောကျထပျ တူညီတာကတော့ Android 10 ကို အခွခေံထားတဲ့ ColorOS 7.1 ကို သုံးနိုငျမှာပါ။
(1). Find X2 စီးရီးတှရေဲ့ ကငျမရာ
Find X2 ရဲ့ နောကျဘကျမှာ ကငျမရာ3လုံးကို တှရေ့မှာ ဖွဈပါတယျ။ F/1.7 lens နဲ့ 48MP 1/43″ Sony IMX586 sensor အသဈကို သုံးပေးထားတယျ။ Sony ရဲ့ 2×2 OCL နညျးပညာအသဈဟာ Dual Pixel sensors တှထေကျ ပိုကောငျးတဲ့ စှမျးဆောငျရညျကို ယူဆောငျလာပါတယျ။ နောကျထပျ ကငျမရာက 12MP ultrawide angle ကငျမရာပါ။ OPPO ကတော့ ultrawide angle video camera လို့ ဆိုပါတယျ။ သူ့မှာ F/2.2 6P lens နဲ့ Sony IMX708 sensor (1.4μm pixel size, 16:9 aspect ratio) ထညျ့ပေးထားပါတယျ။ Ultra Steady Video Pro ဟာ ဗီဒီယိုတှေ ရိုကျတဲ့အခါ တညျငွိမျတဲ့ စှမျးဆောငျရညျမြိုးရအောငျ ပွုလုပျပေးပါလိမျ့မယျ။ တတိယကငျမရာကတော့ 5x hybrid zoom ပါတဲ့ 13MP telephoto ကငျမရာ ဖွဈပါတယျ။ optical magnification ဟာ ဘယျလောကျအတိုငျးအတာအထိ ရမယျဆိုတာ အတိအကြ မသိရပမေယျ့ 2x-3x range ကွား ရှိပါလိမျ့မယျ။ ကငျမရာအားလုံးဟာ Ultra Night Mode ကို ထောကျပံ့ပါတယျ။ Find X2 မှာတော့ Find X မှာတုနျးက သုံးခဲ့တဲ့ slider design ကို မပေ့ဈလိုကျပွီး အရှဘေ့ကျကငျမရာကို punch hole အဖွဈ ထညျ့ပေးထားပါတယျ။ အရှဘေ့ကျကငျမရာကတော့ f/2.4 aperture နဲ့ 32MP Sony IMX616 quad-Bayer sensor ကငျမရာ ဖွဈပါတယျ။ Find X2 Pro ရဲ့ အရှဘေ့ကျ ကငျမရာအရညျသှေးကလညျး Find X2 နဲ့ တူညီပါတယျ။
Find X2 Pro မှာတော့ ပိုမိုစှမျးဆောငျရညျမွငျ့တဲ့ ကငျမရာကို ထညျ့ပေးထာပါတယျ။ သူ့မှာ Find X2 လိုမြိုး F/1.7 lens နဲ့ 48MP 1/43″ Sony IMX586 sensor ပါသလိုမြိုး နောကျထပျ ကငျမရာတှေ ထညျ့ပေးထားပါသေးတယျ။ OIS ထောကျပံ့ထားတဲ့ 48MP Sony IMX689 Sensor သုံးထားပွီး Sony All Pixel Omni-Directional PDAF Technology ထောကျပံ့ထားပါတယျ။ ဒုတိယကငျမရာက 120 ဒီဂရီမွငျကှငျးကယျြရိုကျကူးနိုငျတဲ့ 48MP Sony IMX586 Ultrawide Lens ဖွဈပွီး Macro ဓာတျပုံမြားလညျး ရိုကျကူးနိုငျပါမယျ။ နောကျဆုံးကငျမရာက OIS ထောကျပံ့ထားတဲ့ Periscope Camera ဖွဈပါတယျ။ ဒီကငျမရာက 60x Digital Zoom ၊ 10x Hybrid Zoom နှငျ့ 5x Optical Zoom ရိုကျကူးနိုငျပါတယျ။ OPPO Find X2 စီးရီးမှာ Ultra Video Steady Pro ၊ 10-bit Live HDR Video Recording ၊ Ultra Night Mode 3.0 ၊ 4K Video Recording တို့ ပါဝငျပါတယျ။
OPPO Find X2 နှငျ့ Find X2 Pro တို့မှာ မကျြနှာပွငျ 6.7 လကျမ Punch-Hole Display သုံးထားပါတယျ။ 1080×3168 pixel Quad HD+ Resolution နှငျ့ 21:9 Aspect Ratio သုံးထားကာ In-Screen Fingerprint Reader လညျး ပါဝငျပါတယျ။ ဖုနျးနှဈမြိုးလုံးမှာ HDR+ ထောကျပံ့ထားသလို 120Hz Refresh Rate လညျး ပါဝငျပါတယျ။ ကောငျးမှနျတဲ့ ရုပျထှကျအတှကျ Chip သီးသနျ့ပါဝငျကာ 60fps (သို့မဟုတျ) 120fps ဗီဒီယိုမြားကိုလညျး ကွညျ့နိုငျတဲ့အပွငျ SDR မှ HDR သို့လညျး ပွောငျးပေးနိုငျပါတယျ။ ဖုနျးနှဈမြိုးလုံးရဲ့ မကျြနှာပွငျမှနျက Gorilla Glass6မှနျပွငျကို သုံးထားပါတယျ။
(3). Hardware ပိုငျး အဆငျ့မွငျ့မှုမြား
Snapdragon 865 နဲ့အတူ 12GB LPDDR5 RAM ပါဝငျမှု 256GB UFS 3.0 storage ပေါငျးစပျမှုတှဟော ဒီဘကျခတျေအတှကျဆိုရငျတော့ ဟာ … လနျးလိုကျတာကှာလို့တောငျ ဆိုရမှာပါ။ memory card slot စိုကျမရဘူးဆိုတာကလညျး သိပျတော့ ပွဿနာကွီးတဈခု မဟုတျပါဘူး။ Pro ဗားရှငျးမှာ 512GB Storage ပါဝငျပါတယျ။ OPPO Find X2 က IP54 ရရှိထားကာ ရပေကျဖနျြးမှုဒဏျခံနိုငျပွီး OPPO Find X2 Pro က IP68 ရရှိထားကာ ရစေိမျခံနိုငျပါမယျ။ Pro ဗားရှငျးကို သားရေ၊ စီရာမဈဗားရှငျးတို့နှငျ့ ရှေးခယျြနိုငျပါမယျ။ Find X2 မှာ ဘကျထရီ 4200 mAh ပါဝငျပွီး Find X2 Pro မှာ ဘကျထရီ 4260 mAh ပါဝငျပါတယျ။ 65W SuperVOOC 2.0 ဖွငျ့ အားသှငျးနိုငျမှာဖွဈပွီး အားအပွညျ့သှငျးဖို့ 38 မိနဈပဲ အခြိနျယူရပါမယျ။
(4). OPPO Find X2 Pro Lamborghini Edition
OPPO အနနေဲ့ အစဉျအလာအတိုငျးပဲ X2 Pro Lamborghini Edition ကိုပါ မိတျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။ ဈေးနှုနျးကတော့ ဒျေါလာ 1876 သတျမှတျထားပါတယျ။ Lamborghini Edition ကို Lamborghini Aventador SVJ Roadster ရဲ့ဒီဇိုငျးမြိုး သုံးထားပါတယျ။ OPPO အနနေဲ့ Lamborghini Edition က သုံးဘကျမွငျဒီဇိုငျးမြိုးရရှိဖို့အတှကျ Heat-Absorbing Glass Process သုံးထားကာ ဒါဟာ စမတျဖုနျးသမိုငျးမှာ ပထမဆုံးပါဝငျတာ ဖွဈပါတယျ။ ကြောဘကျမှာ Lamborghini Logo လညျး ပါဝငျပါတယျ။ OPPO Find X2 Pro Lamborghini Edition ရဲ့ ဗူးအတှငျးမှာ OPPO က အထူးထုတျ Accessories မြားလညျး ပါဝငျပါတယျ။ နားကွပျ၊ ကာဗာ၊ Car Charger ၊ USB Cable ၊ Charging Adapter တို့ ပါဝငျပါတယျ။ ဒီဖုနျးမှာ သုံးထားတဲ့ စနဈတှအေားလုံးက OPPO Find X2 Pro နဲ့ အတူတူ ဖွဈပါတယျ။ အနကျရောငျတဈမြိုးတညျးနှငျ့ဘဲ ရှေးခယျြနိုငျပါတယျ။
(5). OPPO စမတျနာရီ
အမြားမြှျောလငျ့ထားတဲ့အတိုငျး OPPO ရဲ့ စမတျနာရီသဈလညျး ဒီပှဲမှာ ပါဝငျခဲ့ပါတယျ။ OPPO Watch လို့ အမညျပေးထားတဲ့ ဒီစမတျနာရီလေးဟာ premium wearable ပုံစံမြိုးလေးဖွဈပွီး Apple watch နဲ့ အတျောဆငျပါတယျ။ OPPO Watch မှာ 3D ထောငျ့ကှေးမှနျ သုံးထားပွီး 41 မီလီမီတာ၊ 46 မီလီမီတာဗားရှငျးတို့နှငျ့ ရှေးခယျြနိုငျပါမယျ။ eSIM ထောကျပံ့ထားကာ စမတျနာရီဖွငျ့ ဖုနျးချေါမှု ပွုလုပျနိုငျပါမယျ။ OPPO Watch မှာ မကျြနှာပွငျ 1.91 လကျမ ထောငျ့ကှေး AMOLED ရုပျထှကျ သုံးထားပွီး 326ppi နှငျ့ 100% DCP –P3 Color Gamut ထောကျပံ့ထားပါတယျ။ စတုရနျးကှကျဒီဇိုငျး သုံးထားပါတယျ။ Watch Face 28 မြိုး ပါဝငျပါတယျ။ 44 မီလီမီတာဗားရှငျးကို 3D Ceramic Black ၊ Aluminium Alloy Frame ဗားရှငျးနှငျ့ 46 မီလီမီတာဗားရှငျးကို စတိနျးလကျဈစတီး ဘျောဒီဗားရှငျးတို့နှငျ့ ရှေးခယျြနိုငျပါတယျ။ အခွားစမတျနာရီမြားလိုဘဲ ဒီစမတျနာရီမှာလညျး အသားနဲ့ ဓာတျမတညျ့တာမြိုးမဖွဈတဲ့ ရျောဘာလကျပတျ သုံးထားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သားရလေကျပတျကိုလညျး ရှေးခယျြနိုငျအောငျ လုပျထားပါတယျ။
ဒီစမတျနာရီသဈမှာ Quad-Optic Heart Rate Sensor ပါဝငျပွီး နှလုံးကနျြးမာရေးအခွအေနကေို အပွညျ့အဝ စောငျ့ကွညျ့ပေးပါမယျ။ ဒီစမတျနာရီမှာ Easy 5km Run ၊ 5-Minute Easy Fitness Mode တို့လညျးပါဝငျကာ ရအေောကျ 50 မီတာအထိ အစိမျခံနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ရကေူးတဲ့အခါမှာလညျး ဝတျဆငျထားနိုငျပါမယျ။ သီခငျြးမြားထညျ့သှငျးပွီး သီခငျြးနားထောငျနိုငျပါမယျ။ Snapdragon Wear 2500 Chipset နှငျ့ အထိုငျခထြားပွီး ဘကျထရီအသုံးခံဖို့အတှကျ Apollo3Chip လညျး ပါဝငျပါတယျ။ OPPO Watch က Smart Mode သုံးမယျဆိုရငျ နာရီ 40 အသုံးခံပွီး Low Power Mode သုံးမယျဆိုရငျ 21 ရကျအထိ သုံးနိုငျပါမယျ။ VOOC Charging Tech ဖွငျ့ အားသှငျးနိုငျမှာဖွဈပွီး 17 မိနဈ အားသှငျးရုံဖွငျ့ ဘကျထရီ 50 ရာခိုငျနှုနျး ရရှိပါမယျ။ OPPO Watch ရဲ့ 41mm Aluminum Alloy (Black / White / Pink) ကို ဒျေါလာ 216 ၊ 46mm Aluminum Alloy (Black / Cream) ကို ဒျေါလာ 289 နှငျ့ 46mm Stainless Steel (Black) ကို ဒျေါလာ 361 သတျမှတျထားပါတယျ။
ယခုနှစ်ကျင်းပမယ့် MWC ကို ဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီးနောက် စမတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီအများစုဟာ ကုမ္ပဏီထုတ်ဖုန်းတွေကို ကိုယ်ပိုင်ပွဲလုပ်ပြီး မိတ်ဆက်လာကြပါတယ်။ အခု ဒီလိုမိတ်ဆက်သူတွေထဲမှာ OPPO လည်း ပါဝင်လာပါပြီ။ တရုတ်စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူ OPPO အနေနဲ့ OPPO Find X2 ၊ OPPO Find X2 Pro နဲ့ OPPO Watch တို့ကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ စမတ်ဖုန်းသစ်2မျိုးမှာ120Hz screens, 5G modems ပါတဲ့ Snapdragon 865 chipsets နဲ့အတူ အားသွင်းမြန်ဆန်မှုတို့လို စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလှတဲ့ အပြင်အဆင်တွေ ထည့်သွင်းပေးလာပါတယ်။ Find X2 Pro မှာတော့ အထင်ကြီးလောက်စရာ ကင်မရာတပ်ဆင်မှုနဲ့ပါ။ ဖုန်း2မျိုးမှာ တူညီတဲ့ 10bit 6.7” AMOLED panel ၊ QHD+ resolution နဲ့အတူ 120Hz refresh rate ကို သုံးထားပါတယ်။ input lag နဲ့ DCI-P3 အရောင်ကို 100% လွှမ်းခြုံမှုရစေဖို့အတွက် 240Hz touch sampling ကိုလည်း ထည့်ပေးထားပါတယ်။ နောက်ထပ် တူညီတာကတော့ Android 10 ကို အခြေခံထားတဲ့ ColorOS 7.1 ကို သုံးနိုင်မှာပါ။
(1). Find X2 စီးရီးတွေရဲ့ ကင်မရာ
Find X2 ရဲ့ နောက်ဘက်မှာ ကင်မရာ3လုံးကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ F/1.7 lens နဲ့ 48MP 1/43″ Sony IMX586 sensor အသစ်ကို သုံးပေးထားတယ်။ Sony ရဲ့ 2×2 OCL နည်းပညာအသစ်ဟာ Dual Pixel sensors တွေထက် ပိုကောင်းတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ယူဆောင်လာပါတယ်။ နောက်ထပ် ကင်မရာက 12MP ultrawide angle ကင်မရာပါ။ OPPO ကတော့ ultrawide angle video camera လို့ ဆိုပါတယ်။ သူ့မှာ F/2.2 6P lens နဲ့ Sony IMX708 sensor (1.4μm pixel size, 16:9 aspect ratio) ထည့်ပေးထားပါတယ်။ Ultra Steady Video Pro ဟာ ဗီဒီယိုတွေ ရိုက်တဲ့အခါ တည်ငြိမ်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်မျိုးရအောင် ပြုလုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ တတိယကင်မရာကတော့ 5x hybrid zoom ပါတဲ့ 13MP telephoto ကင်မရာ ဖြစ်ပါတယ်။ optical magnification ဟာ ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိ ရမယ်ဆိုတာ အတိအကျ မသိရပေမယ့် 2x-3x range ကြား ရှိပါလိမ့်မယ်။ ကင်မရာအားလုံးဟာ Ultra Night Mode ကို ထောက်ပံ့ပါတယ်။ Find X2 မှာတော့ Find X မှာတုန်းက သုံးခဲ့တဲ့ slider design ကို မေ့ပစ်လိုက်ပြီး အရှေ့ဘက်ကင်မရာကို punch hole အဖြစ် ထည့်ပေးထားပါတယ်။ အရှေ့ဘက်ကင်မရာကတော့ f/2.4 aperture နဲ့ 32MP Sony IMX616 quad-Bayer sensor ကင်မရာ ဖြစ်ပါတယ်။ Find X2 Pro ရဲ့ အရှေ့ဘက် ကင်မရာအရည်သွေးကလည်း Find X2 နဲ့ တူညီပါတယ်။
Find X2 Pro မှာတော့ ပိုမိုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တဲ့ ကင်မရာကို ထည့်ပေးထာပါတယ်။ သူ့မှာ Find X2 လိုမျိုး F/1.7 lens နဲ့ 48MP 1/43″ Sony IMX586 sensor ပါသလိုမျိုး နောက်ထပ် ကင်မရာတွေ ထည့်ပေးထားပါသေးတယ်။ OIS ထောက်ပံ့ထားတဲ့ 48MP Sony IMX689 Sensor သုံးထားပြီး Sony All Pixel Omni-Directional PDAF Technology ထောက်ပံ့ထားပါတယ်။ ဒုတိယကင်မရာက 120 ဒီဂရီမြင်ကွင်းကျယ်ရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ 48MP Sony IMX586 Ultrawide Lens ဖြစ်ပြီး Macro ဓာတ်ပုံများလည်း ရိုက်ကူးနိုင်ပါမယ်။ နောက်ဆုံးကင်မရာက OIS ထောက်ပံ့ထားတဲ့ Periscope Camera ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကင်မရာက 60x Digital Zoom ၊ 10x Hybrid Zoom နှင့် 5x Optical Zoom ရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။ OPPO Find X2 စီးရီးမှာ Ultra Video Steady Pro ၊ 10-bit Live HDR Video Recording ၊ Ultra Night Mode 3.0 ၊ 4K Video Recording တို့ ပါဝင်ပါတယ်။
OPPO Find X2 နှင့် Find X2 Pro တို့မှာ မျက်နှာပြင် 6.7 လက်မ Punch-Hole Display သုံးထားပါတယ်။ 1080×3168 pixel Quad HD+ Resolution နှင့် 21:9 Aspect Ratio သုံးထားကာ In-Screen Fingerprint Reader လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဖုန်းနှစ်မျိုးလုံးမှာ HDR+ ထောက်ပံ့ထားသလို 120Hz Refresh Rate လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ ရုပ်ထွက်အတွက် Chip သီးသန့်ပါဝင်ကာ 60fps (သို့မဟုတ်) 120fps ဗီဒီယိုများကိုလည်း ကြည့်နိုင်တဲ့အပြင် SDR မှ HDR သို့လည်း ပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းနှစ်မျိုးလုံးရဲ့ မျက်နှာပြင်မှန်က Gorilla Glass6မှန်ပြင်ကို သုံးထားပါတယ်။
(3). Hardware ပိုင်း အဆင့်မြင့်မှုများ
Snapdragon 865 နဲ့အတူ 12GB LPDDR5 RAM ပါဝင်မှု 256GB UFS 3.0 storage ပေါင်းစပ်မှုတွေဟာ ဒီဘက်ခေတ်အတွက်ဆိုရင်တော့ ဟာ … လန်းလိုက်တာကွာလို့တောင် ဆိုရမှာပါ။ memory card slot စိုက်မရဘူးဆိုတာကလည်း သိပ်တော့ ပြဿနာကြီးတစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။ Pro ဗားရှင်းမှာ 512GB Storage ပါဝင်ပါတယ်။ OPPO Find X2 က IP54 ရရှိထားကာ ရေပက်ဖျန်းမှုဒဏ်ခံနိုင်ပြီး OPPO Find X2 Pro က IP68 ရရှိထားကာ ရေစိမ်ခံနိုင်ပါမယ်။ Pro ဗားရှင်းကို သားရေ၊ စီရာမစ်ဗားရှင်းတို့နှင့် ရွေးချယ်နိုင်ပါမယ်။ Find X2 မှာ ဘက်ထရီ 4200 mAh ပါဝင်ပြီး Find X2 Pro မှာ ဘက်ထရီ 4260 mAh ပါဝင်ပါတယ်။ 65W SuperVOOC 2.0 ဖြင့် အားသွင်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အားအပြည့်သွင်းဖို့ 38 မိနစ်ပဲ အချိန်ယူရပါမယ်။
OPPO အနေနဲ့ အစဉ်အလာအတိုင်းပဲ X2 Pro Lamborghini Edition ကိုပါ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းကတော့ ဒေါ်လာ 1876 သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ Lamborghini Edition ကို Lamborghini Aventador SVJ Roadster ရဲ့ဒီဇိုင်းမျိုး သုံးထားပါတယ်။ OPPO အနေနဲ့ Lamborghini Edition က သုံးဘက်မြင်ဒီဇိုင်းမျိုးရရှိဖို့အတွက် Heat-Absorbing Glass Process သုံးထားကာ ဒါဟာ စမတ်ဖုန်းသမိုင်းမှာ ပထမဆုံးပါဝင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောဘက်မှာ Lamborghini Logo လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ OPPO Find X2 Pro Lamborghini Edition ရဲ့ ဗူးအတွင်းမှာ OPPO က အထူးထုတ် Accessories များလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ နားကြပ်၊ ကာဗာ၊ Car Charger ၊ USB Cable ၊ Charging Adapter တို့ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီဖုန်းမှာ သုံးထားတဲ့ စနစ်တွေအားလုံးက OPPO Find X2 Pro နဲ့ အတူတူ ဖြစ်ပါတယ်။ အနက်ရောင်တစ်မျိုးတည်းနှင့်ဘဲ ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
(5). OPPO စမတ်နာရီ
အများမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်း OPPO ရဲ့ စမတ်နာရီသစ်လည်း ဒီပွဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ OPPO Watch လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ဒီစမတ်နာရီလေးဟာ premium wearable ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်ပြီး Apple watch နဲ့ အတော်ဆင်ပါတယ်။ OPPO Watch မှာ 3D ထောင့်ကွေးမှန် သုံးထားပြီး 41 မီလီမီတာ၊ 46 မီလီမီတာဗားရှင်းတို့နှင့် ရွေးချယ်နိုင်ပါမယ်။ eSIM ထောက်ပံ့ထားကာ စမတ်နာရီဖြင့် ဖုန်းခေါ်မှု ပြုလုပ်နိုင်ပါမယ်။ OPPO Watch မှာ မျက်နှာပြင် 1.91 လက်မ ထောင့်ကွေး AMOLED ရုပ်ထွက် သုံးထားပြီး 326ppi နှင့် 100% DCP –P3 Color Gamut ထောက်ပံ့ထားပါတယ်။ စတုရန်းကွက်ဒီဇိုင်း သုံးထားပါတယ်။ Watch Face 28 မျိုး ပါဝင်ပါတယ်။ 44 မီလီမီတာဗားရှင်းကို 3D Ceramic Black ၊ Aluminium Alloy Frame ဗားရှင်းနှင့် 46 မီလီမီတာဗားရှင်းကို စတိန်းလက်စ်စတီး ဘော်ဒီဗားရှင်းတို့နှင့် ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ အခြားစမတ်နာရီများလိုဘဲ ဒီစမတ်နာရီမှာလည်း အသားနဲ့ ဓာတ်မတည့်တာမျိုးမဖြစ်တဲ့ ရော်ဘာလက်ပတ် သုံးထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သားရေလက်ပတ်ကိုလည်း ရွေးချယ်နိုင်အောင် လုပ်ထားပါတယ်။
ဒီစမတ်နာရီသစ်မှာ Quad-Optic Heart Rate Sensor ပါဝင်ပြီး နှလုံးကျန်းမာရေးအခြေအနေကို အပြည့်အဝ စောင့်ကြည့်ပေးပါမယ်။ ဒီစမတ်နာရီမှာ Easy 5km Run ၊ 5-Minute Easy Fitness Mode တို့လည်းပါဝင်ကာ ရေအောက် 50 မီတာအထိ အစိမ်ခံနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရေကူးတဲ့အခါမှာလည်း ဝတ်ဆင်ထားနိုင်ပါမယ်။ သီချင်းများထည့်သွင်းပြီး သီချင်းနားထောင်နိုင်ပါမယ်။ Snapdragon Wear 2500 Chipset နှင့် အထိုင်ချထားပြီး ဘက်ထရီအသုံးခံဖို့အတွက် Apollo3Chip လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ OPPO Watch က Smart Mode သုံးမယ်ဆိုရင် နာရီ 40 အသုံးခံပြီး Low Power Mode သုံးမယ်ဆိုရင် 21 ရက်အထိ သုံးနိုင်ပါမယ်။ VOOC Charging Tech ဖြင့် အားသွင်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီး 17 မိနစ် အားသွင်းရုံဖြင့် ဘက်ထရီ 50 ရာခိုင်နှုန်း ရရှိပါမယ်။ OPPO Watch ရဲ့ 41mm Aluminum Alloy (Black / White / Pink) ကို ဒေါ်လာ 216 ၊ 46mm Aluminum Alloy (Black / Cream) ကို ဒေါ်လာ 289 နှင့် 46mm Stainless Steel (Black) ကို ဒေါ်လာ 361 သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
Previous articleSummer Catchers
Next articleiPad Air (3rd Gen) ရဲ့ ရုပျထှကျပွဿနာကို အခမဲ့ ပွုပွငျပေးမယျ့ Apple